University of Toronto - Study in Canada. unviersity Top of Canada
gaabinta : U of T
aasaasay : 1827
Ardayda (qiyaastii.) : 59000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Toronto
Qor at University of Toronto
aasaasay sannadkii 1827, Jaamacadda Toronto ayaa Maarraynta hay'ad horseedda barasho ee Kanada, helitaanka iyo aqoonta abuurka. Waxaan ku faraxsanahay in uu noqdo mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ee cilmi-intensive top, bidaya abuurta iyo innovate.
U of network caalamka aqoonsan yahay T ee xubnaha macalimiinta, Qalinjabiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasheeda abuuraa waayo-aragnimo u gaar ah waxbarashada ee ardayda undergraduate iyo graduate. Iyadoo mid ka mid ah kulliyadaha cilmiga ugu adag ee dhammaan nidaamo - daawo ganacsi ka bilaabanaya, waxbarashada magaalooyinka injineernimada, aadamaha waxbarashada, oo dheeraad ah - ardayda waxay leeyihiin fursad ay ku bartaan ka iyo Professor kuwaas oo qaar ka mid ah madaxda Fikirka maanta shaqeeyaan.
The fikrado iyo waxay Been Abuuran in halkan lagu abuuray jidkooda dhigi galay dhaqaalaha caalamiga ah siyaabo badan, iyada oo bilowga-ups, ganacsiga yar yar, ganacsiyaynya iyo iskaashi. Waxaad arki kartaa U xubnaha T hawlan mashaariicda bulshada, khubarada awood noo wararka, iyo in ka badan 500,000 qalin baahsan 140 dalalka.
The University of Toronto waxaa ka go'an in kobcinta bulshada waxbarasho taas oo tacliinta iyo deeqda waxbarasho ee xubin kasta oo laga yaabaa in ay barwaaqoobaan, la ilaalin feejignaadaan xuquuqda aadanaha shaqsi, iyo ballanqaad dhiso si mabaadi'da fursad loo siman yahay, sinaanta iyo cadaalada.
Muddo macnaha guud ee jaamacad gaar ah, ugu muhiim ah oo dhan xuquuqda aadanaha waa xuquuqda xoriyadda hadalka, xoriyadda aqoonta, iyo xoriyada cilmi. Oo waxaan xaqiijinayaa xuquuqda waa kuwan waxba tarayn haddii aysan wuxu xaq u leeyahay in kor loogu qaado su'aalo aad uga naxo iyo caqabadaha daandaansi u cherishedbeliefs ee bulshada ee waaweyn iyo jaamacadda laftiisa.
Waa xaq aadanaha si xagjirka ah, waxbaridda muhiim ah oo cilmi leh oo University uu leeyahay waxaa waajib ku ah dhammaan ayuu ka sarreeyaa in ay ka walaacsan; waayo, waxaa ka mid kalena ma jiro, ma hay'ad kale iyo xafiiska kale ma jiro, in our dimoqoraadiyada liberaaliga casri ah, kaas oo ah qofka masuulka ah ee this xaq u qaali ah oo nugul ruuxa la xoreeyay aadanaha.
The University of Toronto waxaa ka go'an in la dhiso on guulaha ay la soo dhaafay iyo si kor loogu qaado ay cilmi-baarista iyo waxbarashada. Jaamacadda ayaa saadaalineysa in ay sii joogi doonaan jaamacad weyn. Waxaa sii wadi doonaa in ay hantiyaan faa'iidooyinka of size by dhiiri deeq waxbarasho in tiro balaadhan oo ah nidaamo ee aadanaha, cilmiga bulshada, cilmiga iyo xirfadaha ee. Waxaa sii wadi doonaa in ay qiimeeyaan oo ay dhaxal ah kulliyadaha iyo jaamacadaha federaali ah in la siiyo arday badan guriga ah hay'adaha gudahood University badan. Waxay ku dadaali doontaa in ay sameeyaan xarumaha ay goobaha jiidasho u leh hawlaha scholarly.
Kuliyada Applied Science iyo Engineering
Kuliyada Architecture, Muuqaal iyo Design
Kuliyada Kinesiology iyo Waxbarashada Jirdhiska
School of Policy Dadweynaha iyo Maamul
Machadka Ontario ee Daraasaadka ee Waxbarashada
Kuliyada Work Social
aasaasay ee kulliyad gumeysiga ayaa muddo dheer xiiso u of John Graves Simcoe, ugu horeysay Lieutenant-Governor of Upper Canada.As Taliyaha ciidamada ah Oxford-waxbarasho oo la diriray ee Kacaanka War American ah, Simcoe rumeysan yahay waxaa loo baahan yahay kuliyadaha ah si looga hortago faafidda republicanism ka Maraykanka. Guddiga Fulinta ee Upper Canada ayaa lagu talinayaa in 1798 in jaamacadda la aasaasay York, caasimada gumeysiga.
On March 15, 1827, charter boqornimo waxaa si rasmi ah u soo saaray by King George IV, wacdiyaya “ka this time mid College, la style iyo mudnaanta University a … ah waxbarashada dhalinyarada ee mabaadii'da Christian Diinta, iyo inaad iyaga bartid in laamaha kala duwan ee Sayniska iyo Suugaanta … in ay sii wadaan weligiis, in loogu yeedho Boqorka College.” bixinta ee Axdiga inta badan ahaa natiijada ololayn daran by John Strachan, ugu saameynta badan Anglican Bishop of Toronto kaasoo xafiiska qaatay madaxweynaha hore ee kulliyadda. Dhismaha saddex dabaq asalka dugsiga nooleenta Greek ayaa lagu dhisay on site xaadirka ah ee Queen Park.
Under wakiilnimadii Strachan ee, King ayaa College ahaa hay'ad diini ah in aad ula jaanqaaday ku Church of England iyo aqoonyahanada dalka Ingiriiska gumeysiga, loo yaqaan Compact Qoyska. siyaasiyiinta islaaxiyiinta soo horjeeda ee sheekh ee gacanta hay'adaha gumeysiga oo wuxuu la diriray in ay kulliyadda secularized. In 1849, ka dib dood dheer oo kulul, xukuumadda cusub ee la doortay ayaa mas'uul ka ah Upper Canada u codeeyay in magaca King ayaa College sida University of Toronto iyo goysay xiriirkii dugsiga ee la kaniisadda. Iyadoo la filayo in go'aanka this, Strachan u cadhooday ayaa iska casilay sannadkii hore in la furo Trinity College sida a seminary Anglican ee gaarka loo leeyahay. University College waxaa la abuuray sida laanta cilmiga nondenominational oo ka tirsan Jaamacadda Toronto. Intii lagu guda jiray dagaalkii sokeeye ee American ah, hanjabaad go'doominta Midowga on British North America keentay abuurista qoriga Jaamacadda Corps, oo wuxuu arkay dagaalka iska caabinta weerarrada Fenian xadka Niagara ee 1866.
dhidibada loo aasay 1878, School of Science taaban ahaa maamaan u Kuliyada Applied Science iyo Engineering, kaas oo lagu naaneeso skule Tan iyo waagii ay horeeya. Inkastoo Kuliyada Daawada furay 1843, cilmiga caafimaadka la sameeyay by dugsiyada lahaansho ka 1853 ilaa 1887, marka awood u nuugo School Toronto ee Medicine. Dhanka kale, Jaamacada sii waday in ay wada tashi dhigay digrii caafimaad inta lagu jiro xilliga in baaritaanada iyo. Jaamacadda furay Kuliyada Sharciga ee 1887, oo waxaa raacay by theFaculty ee Ilkaha ee 1888, marka Royal College of Takhaatiirta Qaliinka ilkaha noqday affiliate ah. Haweenka ayaa la dhigey jaamacadda markii ugu horeysay ee 1884.
dab A xun ee 1890 digaandigaha gudaha of University College oo baabbi'iyey saddex iyo soddon kun oo muda ka maktabadda, laakiin jaamacadda soo celiyo dhismaha iyo buuxsantay ay maktabadda laba sano gudahood. In ka badan labaatankii sano ee soo socota, nidaam collegiate tartiib tartiib qaaday qaab sida jaamacadda diyaarin xiriirka dhowr kulliyadaha wacdina, oo ay ku jiraan Strachan ee Trinity College ee 1904. Jaamacadda shaqeeya Conservatory Royal ee Music ka 1896 si ay u 1991 iyo Museum Royal Ontario ka 1912 si ay u 1968; labada weli hayn xiriir dhow la leh jaamacadda sida hay'adaha madax-bannaan. The University of Toronto Press waxaa la aasaasay bishii 1901 sida gurigii hore tacliinta daabacaadda ee Kanada. The Kuliyada Dhirta, asaasay 1907 Bernhard xoog haddii diiwaan gashan, waxaa awood u jaamacadda ugu horeysay u huray in sayniska kaynta ee Kanada. In 1910, Kuliyadda Waxbarashada furay iskuulka ay shaybaar, Jaamacadda Dugsiyada Toronto.
The First iyo Second World Wars cabburin hawlaha jaamacadda qaarkood sida undergraduate iyo qalin nin dagdagi askartaba. tartamada ciyaaraha fudud Intercollegiate iyo Doodaha Hart House ayaa ganaax ku maqan, inkastoo kulan bandhig iyo interfaculty ayaa weli lagu qabtay. The Observatory David Dunlap ee Richmond Hill furay 1935, raacay by theUniversity of Institute Toronto ee Daraasaadka Aerospace ee 1949. Jaamacadda xarumood satellite furay Scarborough ee 1964 iyo in Mississauga ee 1967. dugsiyada raacsan jaamacadda ee hore ee Beeraha College Ontario iyo Glendon Hall noqday si buuxda oo madax banaan oo ka mid ah Jaamacadda Toronto iyo qayb ka mid ah noqday University of ciidamada XDS in 1964 iyo Jaamacadda York in 1965, siday u kala horreeyaan. Laga bilaabo 1980-, dhimista ee maalgelinta dawladda keentay dadaalka ururinta dheeraad ah oo adag. The University of Toronto ahaa jaamacadda ugu horeysay Canadian in Khayrbadan hibeynta dhaqaale weyn yahay C $ 1 bilyan.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Toronto ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Toronto rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Toronto
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Toronto.